ပန်ဒိုရာ: ကြိုးညှိခြင်းကဗျာစာအုပ်ကို FM Bagan မှာ ဆွေးနွေးကြခြင်း (အပိုင်း ၁)
ကြိုးညှိခြင်းကဗျာစာအုပ်ကို FM Bagan မှာ ဆွေးနွေးကြခြင်း (အပိုင်း ၁)
(FM Bagan ရေဒီယိုမှာ မင်းခက်ရဲ တင်ဆက်တဲ့ ခေတ်ပြိုင်ကဗျာဆွေးနွေးချက် အစီအစဉ်မှာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ အပိုင်း ၃ ပိုင်းခွဲပြီး တင်ဆက်ခဲ့ကြတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးချက်တွေကို ပို့ပေးတဲ့ ကိုမင်းခက်ရဲ ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။)
ခုကျွန်မတို့ ဆွေးနွေးမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ ကြိုးညှိခြင်းလို့ ခေါင်းစဉ်ပေးထားတဲ့ ခေတ်ပေါ်ကဗျာစာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီစာအုပ်ဟာ အမျိုး သမီးကဗျာဆရာမပေါင်း ၃၅ယောက်ရေးထားတဲ့ ကဗျာပေါင်း ၉၈ပုဒ်ကို စုစည်းထုတ်ဝေထားတာဖြစ်ပါတယ် ။ စာအုပ်ဟာ သမိုင်းဝင်စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ် ။ သမိုင်းဝင်လို့ဖော်ပြရတဲ့ အကြောင်းများစွာထဲက တစ်ခုကတော့ ခေတ်ပေါ်ကဗျာ စာအုပ်မှာ အမျိုးသမီးကဗျာဆရာတွေချည်းပဲ ဒီလောက်အများအပြား စုစည်းထုတ်ဝေတဲ့ ကဗျာစာအုပ် ရယ်လို့ တစ်ခါမှ မပေါ်သေးဘူးတဲ့ အတွက်ပါပဲ ။
ဒီလို သမိုင်းဝင်ကဗျာစာအုပ်ကို ၂၀၁၂ သြဂတ်စ်လအတွင်းမှာ နှစ်ကာလများစာအုပ် တိုက်ကနေ ထုတ်ဝေပေးခဲ့ပါတယ် ။ အတွင်းမှာ ကဗျာဆရာပေါင်း ၃၅ဦးက ပျမ်းမျှ သုံးပုဒ် ဒါမှမဟုတ် နှစ်ပုဒ်လောက် ရေးသားကြပါတယ် ။ ကဗျာဆရာမတွေရဲ့ ပုံတူ ခဲကောက်ကြောင်းပုံလေးတွေကို ဆရာမ ပန်ဒိုရာက ရေးဆွဲပေးပြီး ဒီစာ အုပ်ကိုလည်း ကဗျာဆရာမ ပန်ဒိုရာကပဲ စုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ ၀ါဝင်တဲ့ ကဗျာဆရာမတွေကို အသက် အရွယ်အလိုက်စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ။ ပါဝင်တဲ့ ဆရာမတွေကတော့ ဆရာမ ခင်ဝင်းသစ် ၊ ဆရာမ ငြိမ်းဒဿန၊ ဆရာမ မအိ ၊ ဆ၇ာမ စမ်းစမ်းတင် ၊ ဆရာမ မိနှောင်း၊ ဆရာမ ဧဧသန်း ၊ ဆရာမ မရီဝေ ၊ ဆရာမ မနွေ၊ ဆရာမ သန့်စင် အေး ၊ ဆရာမခင်မြဇင် ၊ ဆရာမ ဖြူမွန် ၊ ဆရာမ မေငြိမ်း ၊ ဆရာမ ခက်မာ ၊ ဆရာမ မေအောင်လင်း ၊ ဆရာမ စုမီအောင် ၊ ဆ၇ာမ စမ်းသီတာ ၊ ဆရာမ မိကောက် ၊ ဆရာမ မြတ် ၊ ဆရာမ K မြနွယ် ၊ ဆရာမ ကြည်မွေ့အိမ် ၊ ဆရာမ မနော်ဟရီ ၊ ဆရာမ ရှင်ဒေ၀ီ ၊ ဆရာမ အိန္ဒြာ ၊ ဆရာမ ပန်ဒိုရာ ၊ ဆရာမ သွေး(စစ်ကိုင်း ) ၊ ဆရာမ လုံမငြိမ်းချမ်း ၊ ဆရာမ ညိုပြာဝိုင် ၊ မှုးဒါရီ ၊ ဆရာမ မိုးဒေ၀ါ၊ ဆရာမ မဏိခ ၊ ဆရာမ ငယ်ငယ် (ကျောက်ဆည်) ၊ ဆရာမ ချိုပိန်းနောင် ၊ ဆရာမ မယ်ယွေး ၊ ဆရာမ နေအေဒီ ၊ဆ၇ာမ မွန်းသူအိမ် တို့ပါပဲ ။ ကျွန်မတို့ ဒီတစ်ပါတ်မှာ အဓိက ဆွေးနွေးမယ့် အကြောင်းကတော့ ဒီစာအုပ်ဟာ ခေတ်ပြိုင်မြန်မာကဗျာ သမိုင်းမှာ အရေးကြီးသလဲ ဆိုတာပါပဲ ။ ကဗျာ ရွတ်ဆိုမှု လုပ်ဖို့ရာ စိတ်ကူးမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကဗျာအကြောင်းဆွေးနွေးမှုမှာ ကဗျာရွတ်ဆိုမှုနဲ့ စတင်ချင်တဲ့အတွက် ကဗျာ စာအုပ်ကို ဦးဆောင် စုစည်းခဲ့သူ ကဗျာဆရာမ ပန်ဒိုရာကို ကျေးဇူးတင်ရှိတဲ့ အနေနဲ့ ဆရာမရဲ့ ကဗျာသုံးပုဒ်ထဲက တစ်ပုဒ်ကို စတင် ရွတ်ဆိုပါ့မယ် ။ ကဗျာမှာ အဓိကဇာတ်ပြောသူက ဘောလုံးတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ် တနည်းအားဖြင့် ဆရာမက ကဗျာမှာ သူမ ရဲ့ဘ၀ကို ကွင်းထဲက ကစားစရာ အလုံးတစ်လုံးအဖြစ်တင်စားရင် လောကကို ရှုမြင်တတ်လာအောင် ခွင့်လွှတ်စိတ်နဲ့ ရေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
အဆုံးအစ ရှာမရတာ ဘ၀ပေါ့
မြင့်ရာက နိမ့်ရာကို ဆင်းတယ်
တစ်ချက်နှစ်ချက် ပြန်ကန်ပြီး ခုန်ထတယ်
ကိုယ်ကတော့ မထိထိအောင် ရိုက်ပြီး
တဖက်လူက ပြန်ဆယ်လို့မရအောင် ပို့တယ်
စည်းမျဉ်းတွေရဲ့ အတွင်းဘက်မှာ အပြင်ဘက်မှာ
ပုတ်ကာ ပုတ်ကာ သယ်ယူသွားတာတွေ
ခြေထောက်ကိုသုံးတယ် ခေါင်း ပခုံးကိုသုံးတယ်
တစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံးထိရမှာလား မထိရဘူးလား
တစ်လုံးပျောက်သွားရင် နောက်တစ်လုံး အစားထိုးဝင်လာမှာလား
ကိုဗညား။ မပိုင်ပိုင်ရေ မထမဆုံးနိဒါန်းပြောသွားတဲ့ အထဲမှာ ကျွန်တော် မရှင်းတာလေး ရှိတယ် ။
မပိုင်ပိုင် ။ ဟုတ် ။ ကိုဗညားပြောပါ ။
ကိုဗညား ။ ခုကဗျာ ဆရာမ ၃၅ယောက်ရေးတဲ့ စာအုပ်ကို ဘာကြောင့် သမိုင်းဝင် စာအုပ်လို့ပြောရတာလဲ ဆိုတာပါပဲ။
ကိုသော် ဇင် ။ ဟုတ်တယ် ကိုဗညားရေ ၊ ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးရမယ့် အကြောင်းက ဒါဟာ သမိုင်းဝင် စာအုပ်တစ် အုပ်ဖြစ်တယ် ။ အင်း သမိုင်းဝင်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကြီးကျယ်တယ်ဆိုရင်တောင်မှာ ဒီစာအုပ်ဟာ ခေတ်ပြိုင်ကဗျာ သမိုင်း မှာ အရေးကြီးတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပဲလို့ ဆိုရမယ် ။ အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ ခေတ်ပြိုင်ကဗျာ သမိုင်းကို ပြောရင် ဒီစာအုပ် ကိုပါထည့်ပြောရမယ့် သမိုင်းဝင်သဘောပါလာပြီလို့ပဲ ဆိုရမှာပေါ့ နော်။ ကိုဗညားမေးသလိုပါပဲ ။ ကျွန်တော်လည်း အမျိုးသမီး ကဗျာဆရာမတွေ စာအုပ်တွေအကြောင်းဆွေးနွေးမှာ ဆိုတော့ မပိုင်ပိုင်ကိုပဲ ဦးဆောင်ဆွေးနွေး စေချင်ပါတယ် ။ လုပ်ပါဦး မပိုင်ပိုင်ရ ။
မပိုင်ပိုင် ။ ကျွန်မရဲ့ အမြင်ကိုမပြောခင် ကဗျာစာအုပ်စီစဉ်သူ ဆရာမပန်ဒိုရာရဲ့ စကားမှာပါတဲ့ အမြင်လေးတစ်ရပ်ကို အရင်း ကိုးကားပါရစေ ။ ဆရာမက ယနေ့ခေတ်ပြိုင်ကဗျာအခင်အကျင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး “ တမင်ဖြစ်ဖြစ် ၊ မေ့လျော့ လို့ ဖြစ်ဖြစ် ၊ အမှတ်တမဲ့ သတိမထားမိလို့ဖြစ်ဖြစ် ၊ မပေါက်မရောက် နိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အမျိုးသမီးကဗျာဆရာမတွေ တစ်ဦး တစ်ယောက်မှ မပါတဲ့ ကဗျာ စုစည်းမှု စာအုပ်မျိုးတွေကတော့ မြန်မာကဗျာလောကမှာ ထွက်ပေါ်ခဲ့တာကို တွေ့နေရတယ်။ ” လို့ ဆိုတာ ။ ကျွန်မလည်း ဒီအမြင်ကို ထောက်ခံတယ် ။ ကဗျာစာအုပ်ကို လက်ရွေးစင်စုစည်းထုတ်ဝေတာတွေ မကြာ ခဏ ကဗျာလောကမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့ဖူးပါတယ် ။
ကိုဗညား ။ လက်ရွေးစင် ဆိုတာကို ကျွန်တော်သဘောကျတယ် ။ ကဗျာ စာအုပ် စုစည်းထုတ်ဝေမှုမှန်သမျှဟာ ရွေးချယ် သူရဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အသုံးချပြီး လက်ရွေးစင် စုစည်းရွေးချယ်ရတာတွေချည်းပဲနော ။
မပိုင်ပိုင် ။ ဟုတ်တယ် ကိုဗညားရဲ့ ။ အဲဒိလို လက်ရွေးစင်စုစည်းမှုတွေ အတော်ထွက်ခဲ့ဖူးတယ် ။ သိပ်မကြာခင်နှစ်က “ခေတ်ပြိုင်ကဗျာတွေကိုကဗျာဆရာတစ်ယောက်တစ်ပုဒ်နှုန်းနဲ့ အယောက်ခြောက်ဆယ်ကျော် စုစည်းထတ်ဝေမှု ရှိခဲ့ဖူး တယ်။
ကိုသော်ဇင် ။ ဟုတ်လား ။ ခေတ်ပြိုင်ကဗျာတွေကို ရွေးချယ်သူက သူကြိုက်နှစ်သက်ရာ သင့်တော်ရာ ကိုရွေးချယ်တာပေါ့ ။
မပိုင်ပိုင် ။ ဟုတ်တယ် အဲဒီရွေးချယ်မှုမှာ ကျွန်မသိသလောက်ဆိုရင် မိန်းမတစ်ယောက်မှမပါဘူး ။
ကိုဗညား ။ ဟုတ်လား ။ ခုစာအုပ်မှာလဲ ယောက်ျားတွေ တစ်ယောက်မှမပါဘူးနော်။
ကိုသော်ဇင် ။ အင်း ကိုဗညား ကျွန်တော့် အထင် ဒီစာအုပ်နှစ်ခုရဲ့ သဘောကတူတော့ မတူဘူးဗျ ။ ပထမ ယောက်ျားတွေ ချည်းပဲ ပါတဲ့ ကဗျာက ခေတ်ပြိုင်ကဗျာရေးတဲ့ သူဘယ်သူမဆို ကဗျာကို ရွေးချယ်သူက ကြိုက်နှစ်သက်မယ်ဆိုရင် ထည့် ပြီး ရွေးချယ်မှာ ။ ခု ကဗျာစာအုပ်ကတော့ မြန်မာပြည်မှာ မိန်းမတွေချည်းပဲ ထုတ်တဲ့ ကဗျာ စာအုပ်ရယ်လို့ မရှိသေးတဲ့ အချက်ရယ် ၊ ရှေ့က ကဗျာ ညွန့်ပေါင်းကျမ်းတွေမှာ ခေတ်ပြိုင်ကဗျာရယ်လို့ ရွေးချယ်ပြီး မိန်းမကဗျာဆရာမတစ်ယောက်မှ မရွေးချယ်သွားတာ ၊ မိန်းမ ကဗျာဆရာမတွေ ဘေးဖယ်ထုတ်ထားတဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ်ကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမေးခွန်း ထုတ်ထားတဲ့သဘောပဲ ။
ကိုဗညား ။ ဟုတ်ပြီ ။ ဒါကြောင့် အမှာစာမှာ ကဗျာဆရာမ ပန်ဒိုရာက “… မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကဗျာရေးနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ရှိကြတယ်ဆိုတာရယ် ၊ သူတို့ဟာ ဘယ်လိုကဗျာမျိုး ရေးသားနေကြတယ် ဆိုတာရယ်ကို တတ်နိုင်သမျှ စုစည်းပြီး အရှိ အတိုင်း မှတ်တမ်းတင် ထင်ဟပ်ပြချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဒီစာအုပ်ကို စီစဉ်ခဲ့ပါတယ် ” လို့ဆိုတဲသဘောပေါ့ ။
မပိုင်ပိုင် ။ ။ ဟုတ်တယ် ကိုသော်ဇင်တို့ ကိုဗညားတို့ပြောတာမှန်တယ် ။ ခေတ်ပေါ်ကဗျာလက်ရွေးစင်စုစည်းထားတဲ့ ကဗျာ စာအုပ်တွေမှာတင်မကဘူး ။ လက်ရွေးစင်ရွေးချယ်ပြီ ဆိုရင် မိန်းမတွေ ဘေးဖယ်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားတာပဲ ။ ဥပမာ ကျွန်မ ပြရရင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စကားပြေဖတ်စာအုပ်မှာ သိင်္ဃသူ့သမီးနဲ့ မိဖုရားဖွားစောဆိုပြီး မိန်းမနှစ်သာပါတယ် ။ ပါတဲ မိန်းမနှစ်ဦးရဲ့ အရေးအသားကလည်း ကျောက်စာတွေပဲ ။ နောက်ပိုင်းမှာ ခန့်မှန်ခြေ ၆ရာ ပတ်ဝန်ကျင်လောက်ရှိတဲ့ အရေး အသားတွေကို ဖော်ပြရာမှ မိန်းမတွေရဲ့ အရေးအသားတွေမပါတော့ဘူး ။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ မိန်းမကဗျာဆရာမတွေ နည်းပါးတယ် ဆိုတာ မငြင်းပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် လက်ရွေးစင်ရွေးချယ်သူတွေကို မေးရမှာက နှစ်ပေါင်းခြောက်ရာအတွင်း သူတို့အနေနဲ့ မိန်းမစာရေးဆရာမတစ်ယောက်လောက်တော့ ရွေးရမယ်ဆိုတဲ့ အသိဘာကြောင့် မဖြစ်တာလဲ ။ အဲဒီလို ရွေးချယ်မရလောက် အောင် မိန်းမတွေဟာ ညံ့ဖျင်းနေပါတယ်လို့ရော ရွေးချယ်သူဟာ ပြောရဲမလား။ နှစ်ပေါင်း ခြောက်ရာ အတွင်း ရွေးချယ်သူအနေနဲ့ သူရွေးချယ်ရလောက်အောင် မိန်းမစာရေးဆရာမတွေရွေးချယ်တဲ့ စာကောင်းတစ်ပုဒ် တစ်လေ မှ မပေါ်ပေါက်ခဲ့ဖူးလား ။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်မထပ်ပြီး ပြောချင်တာက ခု အမျိုးသမီးကဗျာဆရာမတွေဟာ ကျွန်မတို့လည်း လူတွေပဲ ၊ ကျွန်မတို့လည်း ခေတ်ပြိုင်ကဗျာတွေ ရေးတယ် ဒီမှာကြည့်ကြလို့ ပြောရလောက်အောင်ကို ထုတ်ပြလာပြီ။
ကိုသော်ဇင် ။ မပိုင်ပိုင်ရေ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်မေးချင်တာ လက်ရွေးစင် စုစည်းထုတ်ဝေတဲ့ အခါ ယောက်ျား ကဗျာ ဆရာမတွေလောက် မိန်းမကဗျာဆရာမတွေက ကဗျာ အရေးနည်းတာနဲ့ အရေအတွက်အားဖြင့်နည်းတာတွေ ကြောင့် မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။
ကိုဗညား ။ အင်း မေးခွန်းက အတော်ကလေး တာသွားတဲ့မေးခွန်းပဲ ။ မိန်းမတွေအရေအတွက်နည်းလို့ ခေတ်ပြိုင်ကဗျာ ညွန့်ပေါင်းကျန်မှာ တစ်ယောက်မှ မပါတာကတော့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက်သိပ် ကြည့်မကောင်းလှဘူးထင်တယ် ။ မပိုင်ပိုင်ရော ဘယ်လိုဖြေဖို့ ကြိုးစားမလဲ။
မပိုင်ပိုင် ။ ကျွန်မမေးချင်တာက တစ်ခုတည်းပဲ ။ မိန်းမတွေ ကဗျာရေးတာနည်းလို့ မပါဘူးလို့ ဆင်ခြင်မပေးနဲ့။ မိန်းမကဗျာ ဆရာမတွေ ကျွန်မတို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ တစ်ယောက်မှ မရှိနေရင်တောင်မှ သူတို့တွေကဗျာရေးနိုင်အောင် လက်ရွေး စင် ကျမ်းမှာ ပါဝင်လာအောင် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်လုံးက လုပ်ရမှာ ။ ခုတော့ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံမှာ မိန်းမစာရေးဆရာမတွေ ရော ၊ မိန်းမ ကဗျာဆရာမတွေပါရှိရဲ့သားနဲ့ မပါလာတာကတော့ ဒါဟာ မရှိလို့မရွေးတာထက် နိုင်ငံတကာမှာတော့ “ ဘေးဖယ်ထုတ်တာ ၊ marginalized လုပ်တာ ” လို့ခေါ်တယ် ။ ကျွန်မ ကဗျာတွေဖတ်ဖူးတယ် ။ ကဗျာဆရာတွေ ပြောတာလည်း တစ်ခါတစ်ရံကြားဖူးတယ် ။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှ ကဗျာဆရာတွေ ရှိနေတာဟာ နိုင်ငံအတွက် ဂုဏ်ယူစရာပဲ ဆိုတာမျိုးတွေ ။ မိန်းမကဗျာဆရာမတွေက နည်းပါးလို့ ၊ ကဗျာသိပ်မရေးလို့လို့ မရွေးချယ် ဖြစ်တာပါ လို့ဆင်ခြေပေးသူတွေကို ဒါဆို ကျွန်မပြောချင်တာက “ကျွန်မတို့ နိုင်ငံမှာ ကဗျာဆရာမတွေ ရှိနေတာကရော အင်မတန် ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ မဟုတ်ဘူးလား ။ အိမ်နီးနားချင်း စင်္ကာပူတို့ ထိုင်းတို့ထက် ကျွန်မတို့မှာ ယဉ်ကျေးမှုကိစ္စကို လုပ်နေတဲ့ ကဗျာဆရာတွေများလို့ ဂုဏ်ယူတယ်ဆိုရင် ကဗျာဆရာမတွေများတာကရော ပိုပြီး ဂုဏ်ယူဖွယ်မဟုတ်ဘူးလား ။ ဒီတော့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်လုံးနဲ့ချီပြီပြောရရင် ကဗျာဆရာမနည်းနေရင်တောင်မှ အဲဒီနည်းနေတဲ့ အထဲက ဂရုတစိုက်ရွေးချယ် မှုတွေ လုပ်ရမှာ။
ကိုဗညား ။။ အင်း တကယ်လို့ မိန်းမတွေ ရေးတဲ့ ကဗျာတွေက မကောင်းလို့ မရွေးချယ်တာပါလို့ ဆိုရင်ရော မပိုင်ပိုင်ရာ။
မပိုင်ပိုင် ။ ။ကောင်းကောင်းတယ် မကောင်းဘူးဆိုတာကတော့ အလွန်ရှုပ်ထွေးတဲ့ ပြဿနာရပ်ပါ ။ ဘယ်လို စံတွေကို ပြပြီး ကောင်းတယ် မကောင်းတယ် ဆုံးဖြတ်မှာလဲ ။ ဝေဖန်ရေးသီအိုရီတွေအရပြောရင် ဝေဖန်ရေးသစ်တွေက ကဗျာထဲမှာ သုံးတဲ့ အလင်္ကာ ပုံသဏ္ဌာန်တွေနဲ့ အကြောင်းအရာနှစ်ခု အံကိုက်နေရင်ကောင်းတာပဲ။ ဒါမှမဟုတ် ကောင်းတယ်လို့ မသုံးချင်ရင် ဖတ်ရှုရအဆင်ပြေတာပဲ ။ ပို့စ်ကိုလိုနီယာယ်တွေက ကိုလိုနီလွန်တွေ့ကြုံခံစားမှုတွေကို ဖော်ပြနိုင်ရင် ကဗျာက ဖတ်ရှုရ အဆင်ပြေတာပဲ ။ က္ကတ္ထိယ ၀ါဒီတွေကတော့ မိန်းမတွေရဲ့ သီးခြားခံစားမှုအတွေ့အကြုံကို ထုတ်ဖော်ပြနိုင်ရင် သဘောကျမှာပဲ ။ သီအိုရီတွေအရတူမှမတူတာ ။ ဒါမှမဟုတ် ရွေးချယ်မှုတွေကို ကဗျာဖတ်အတွေ့အကြုံအရလုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်မ မသိဘူး ။ ကဗျာဖတ်အတွေ့အကြုံအရလုပ်ရင် ယောက်ျားကဗျာတွေကို သာ အဖတ်အရှုများတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ယောက်ျားတွေရဲ့ နမိတ်ပုံနဲ့ ယော်က်ျားကြီးစိုးလွှမ်းမိုးမှုသဘောပါတဲ့ အမြင်တွေကိုသာ ကောင်းမယ် လို့ ယူမှာပဲ ။
ကိုသော်ဇင် ။ နောက်ဆုံး သဘောတရားတစ်ခုကို ကျွန်တော်နားမလည်ဘူး မပိုင်ပိုင် ။ ကဗျာဖတ်အတွေ့အကြုံအရလုပ်ရင် ယောက်ျားကဗျာတွေကို သာ အဖတ်အရှုများတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ယောက်ျားတွေရဲ့ နမိတ်ပုံနဲ့ ယော်က်ျားကြီး စိုးလွှမ်းမိုးမှုသဘောပါတဲ့ အမြင်တွေကိုသာ ကောင်းမယ် လို့ ယူမှာပဲ ဆိုတဲ့ စကားကို ကျွန်တ်ာနားမလည်းဘူး။
မပိုင်ပိုင် ။ ။ အင်း ကျွန်မပြောချင်တာ ဂန္ထ၀င်တွေနဲ့မော်ဒန်ကဗျာတွေ ငြင်းခဲ့တုန်းကလိုပါပဲ ။ ဂန္ထ၀င်ကိုပဲ အဖတ်များတဲ့ ယခင် ကဗျာဆရာကြီးတွေက မော်ဒန်ကဗျာကို ကြိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး ။ မော်ဒန်ကဗျာအများစုကို မကောင်းဘူးလို့ပဲမြင်မှာ။ တစ်ပုဒ်တစ်လေ လောက်သာကြိုက်တယ် ကောင်းတယ်လို့လည်း မြင်နိုင်တာပဲ ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်မှုကိုသာ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ခါတစ်လေ ကဗျာဖတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်တွေ အတွင်းမှာ ကိုယ့်အပေါ် ပြန်လွှမ်းမိုးကြီးစိုးထားတဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်မှုနဲ့ကောင်းမှုသဘောတွေရှိနေတယ် ။ ကဗျာအရေးကျဲပြီး ၊ အရေအတွက် နည်း ပါးတဲ့ အမျိုးသမီးကဗျာဆရာမတွေရဲ့ ကဗျာကို ဖတ်ပြီး ယောက်ျားကဗျာဆရာတွေ လွှမ်းမိုးကြီးစိုးထားတဲ့ ခေတ်ကြီး အတွင်းမှာ ကိုဗညားမေးသလို မိန်းမကဗျာဆရာတွေ ရေးတဲ့ ကဗျာတွေ မကောင်းလို့ မရွေးချယ်တာပါလို့ ပြောရင် ကျွန်မ တို့ လိုက်ပြီး အငြင်းမပွားပါဘူး ။ ပြီးတော့ လူမှုလိင် ပညာ(gender studies) တွေမှာ ကျွန်မတို့တွေ့ရတဲ့ အတိုင်း ယောက်ျားတွေရဲ့တွေ့ကြုံခံစားမှုနဲ့ မိန်းမတွေရဲ့တွေ့ကြုံခံစားမှုမတူတဲ့ အခါမှာ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် တွေ့ကြုံခံစားမှုတွေ ကွဲပြားနေတယ်ဆိုတဲ့ နှလုံးသွင်းကောင်းကောင်းနဲ့ ကဗျာမဖတ်ရင်လည်း မိန်းမကဗျာဆရာမ အများစုရဲ့ ကဗျာအပေါ် ခံစားမိမဟုတ်ဘူး။
ကိုဗညား ။ ။ ကျွန်တော့်ကို အကျယ်ချဲ့ပြီး ရှင်းပြပေးပါလား ။ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တွေ့ကြုံခံစားမှုတွေ ကွဲပြားနေတာကို နှလုံးသွင်းပြီး ကဗျာဖတ်ရမယ်ဆိုတာ။
မပိုင်ပိုင် ။ ။ဒီစကားမှ ကျွန်မပြောချင်တာ တစ်အချက် ယောက်ျားနဲ့မိန်းမတွေ့ကြုံခံစားမှုချင်းမှာ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ အပိုင်းတွေရှိနေတယ်။ ၂ အချက် ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့တွေ့ကြုံခံစားမှုတွေနဲ့ပဲ အမျိုးသမီးကဗျာတွေကို တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူး ။ ကွဲပြားခြားနားနေတဲ့ တွေ့ကြုံခံ စားမှုတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာနဲ့ ကဗျာဖတ်မှ ဖြစ်မယ်။
ကိုသော်ဇင် ။ ဟုတ်တယ်ဗျ ။ မပိုင်ပိုင်ပြောတော့မှ ကျွန်တော်တို့ ခုနက ရွတ်လိုက်တဲ့ ဆရာမပန်ဒိုရာရဲ့ကဗျာမှာ ထူးခြား ချက်ကိုသွားတွေ့တယ်။
မပိုင်ပိုင် ။ ဟုတ်တယ် ကိုသော်ဇင် ။ ဒီထူးခြားချက်က ယောက်ျားတွေနဲ့ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ တွေ့ကြုံခံစားမှုအပိုင်း ကနေ ထွက်လာတာမြင်နိုင်တယ်။
ကိုဗညား ။ လုပ်ပါဦး ကိုသော်ဇင်က ဘာမြင်လိုက်သလဲ။
ကိုသော်ဇင် ။ ။တခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ ခုနက ပြောသလိုပဲ ။ ယောက်ျားကဗျာတွေလည်း အဖတ်များ ၊ ကျွန်တော့ အတွက်လည်း မအီမလည်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ ကဗျာခေါင်းစဉ်ပဲ ဗျ။
မပိုင်ပိုင် ။ ဟုတ်တယ် ။ ကျွန်မသတိထားမိတာက ဒီခေါင်းစဉ်ရောကဗျာမှာ ၊ ယောက်ျားကဗျာဆ၇ာတွေနဲ့ ကွဲပြားခြား နားနေတဲ့ တွေ့ကြုံခံစားမှုအပိုင်းကိုတွေ့ရတယ် ။ ကိုသော်ဇင်လည်း သိတဲ့ အတိုင်းပဲ ။ ယောက်ျားကဗျာ ဆရာတွေက ဘောလုံးအကြောင်းတွေကို ရေးကြတယ် ။ ဘောလုံးဟာ သူတို့ရဲ့ လိင်သဘာဝနဲ့လည်း ဆက်စပ်နေသလို မိန်းမ ဘောလုံး လောကရယ်လို့ ရှိလာပေမယ့် ဘောလုံးဟာ ယောက်ျားအဓိကလွှမ်းမိုးတယ် ။ သင်္ကေတာ အပိုင်းမှာကိုက ဘောလုံးဟာ ယောက်ျား တစ်ယောက်ရဲ့ လိင်သဘာနဲ့ ဆက်စပ်နေတာ လေ ။ ခုပန်ဒိုရာရဲ့ ကဗျာ ခေါင်းစဉ်က ဘောလုံးတစ်ခုတည်း ကို မဦးတည်ချင်တော့ဘူး ။ ကစားလုံးများ ရယ်လို့သုံးတာ ဒီအသုံးဟာ ဘောလုံးလို့ မသုံးတဲ့ အတွက်ကိုက ယောက်ျား ကဗျာဖတ်သူတွေရဲ့ လိင်အရဆက်သွယ်ချက်မှာ မသိမသာကင်းကွာ သွားစေတာ ၊ သူဖတ်ခဲ့တဲ့ ယောက်ျားကဗျာတွေလို ဘောလုံးတစ်ခုတည်းကို ဦးတည်ရေးမထားတာကြောင့် အလင်္ကာနဲ့ နမိတ်ပုံအားနည်းတယ်လို့ ယောက်ျားအဓိက အမြင်အရ မြင်မှာပဲ။
ကိုဗညား ။ ဟုတ်တယ် ။ ကျွန်တော်လည်း မပိုင်ပိုင် မပြောတုန်းက စဖတ်ဖတ်ချင်းမှာ ခေါင်းစဉ်က ကျွန်တော့်အတွက် စိမ်းတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးလို့ ခံစားလိုက်ရတယ်။ နောက်တော့ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ဖိုဆန်မှုနဲ့ ကင်းဝေးတဲ့ အသုံးဆိုတာတွေ့လိုက်ရတယ်။
ကိုသော်ဇင် ။ ။ အင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ယောက်ျားကြီးစိုးလွှမ်းမိုးတဲ့ ကဗျာရွေးချယ်မှုနဲ့ ရွေးချယ်ပုံတွေ အတွင်းမှာ ယခု အမျိုးသမီးကဗျာ စာအုပ်ပေါ်ထွက်လာတာဟာ ထူးခြားမှုကြီးတစ်ခု ၊ ယောက်ျားကြီးစိုးလွှမ်းမိုးသလို ဖြစ်နေတဲ့ ခေတ်ပြိုင် ကဗျာအတွက် ကြိုဆိုရမယ့် သမိုင်းဝင်ကိစ္စတစ်ခုဆိုတာပြောပြီးပြီ ။ မပိုင်ပိုင် ဘာနဲ့ အဆုံးသတ်ချင်ပါသလဲ။
မပိုင်ပိုင် ။ ယောက်ျားကြီးစိုးလွှမ်းမိုးသလို ဖြစ်နေတဲ့ ခေတ်ပြိုင်ကဗျာအတွက် ထူးခြားမှုတစ်ခုပါပဲ ။ ဒီထူးခြားမှုကို မိန်းမတွေ ၃၅ယောက်လုံးက သူတို့ဘာသာသူတို့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြတာပါ ။ နောက်နောင် တက္ကသိုလ် လက်ရွေးစင်ကဗျာကျမ်းတွေ သင်ကြားဖို့လုပ်တဲ့ အခါ ၊ ခေတ်ပြိုင်ကဗျာ စုစည်းမှုတွေလုပ်တဲ့ အခါ မိန်းမတွေကို ဂရုစိုက် လာစေဖို့ မီးမောင်းထိုးပြထားတဲ့ စာအုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်လိုနယ်ပယ်မျိုးမှမဆို အားနည်းနေတဲ့ လူနည်းစုတွေကို အလေးပေး ခြင်းဟာ ယဉ်ကျေးတဲ့ ဒီမိုကရေစီလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
( ဆက်လက် ဖော်ပြသွားပါမည်)
Posted by pandora at 12:50 PM
Dear Sayama Pandora,
Do you haveaplan to post all the poems included in the book? I am interested in readingapoem written by Sayama Thant Sin Aye. Is sheaLecturer in Yangon University? If so, I would like to read her poem and may you please guide me how I can get the book. I know that the book is available to purchase in Singapore but I am recently living here in the U.S. Thank you in advance.
Please email to pandorao@gmail.com or poetpandora@gmail.com
I will see how I can arrange to send you the book.